Ngubani kanye kanye uMmameli wakho ojolise kuye? | Martech Zone
Ngubani kanye kanye uMmameli wakho ojolise kuye?
NgoLwesibini, Juni 14, 2011 NgoLwesithathu, Oktobha 16, 2013 Douglas Karr
Enye yezinto ezisisiseko sokungaqondani malunga nemithombo yeendaba kwi-Intanethi ichonga ukuba yeyiphi na ekujoliswe kuyo ngabaphulaphuli bakho. Baninzi kakhulu abantu abajolise ekubeni ingaba akukho themba kubo. Kule veki, sisebenze nenkampani enye ekhalaza ngelokuba amanqanaba eC-level ayengekho kwi-Intanethi.
Andizukuphikisana nokuba ayinyani na. Kodwa imithombo yeendaba ekwi-Intanethi yenziwe ngabantu abaninzi abohlukeneyo abanokuthi baphembelele amanqanaba e-C kwaye bamfikise phambi kwabo. Izehlo zentlalo zibonelela ngamathuba. Ukunxibelelana ngeendawo ezinjenge-LinkedIn kukusondeza. Izithuba zeblogi, ukukhankanywa kwezentlalo kunye nabalandeli kukunceda ukuba uqhubeke ujikeleze ithemba kwaye wenze inkampani yakho ibonakale.
Umzekelo, ukuba inkampani yakho ikhangela abatyali mali bokuqalisa kunye noosomashishini, iifem zobuchwephesha obuphezulu, i-IP kunye namagqwetha okuqalisa, kunye nabagcini zimali bokuqalisa ngabantu abakhulu bokufika ngaphambili. Banobudlelwane kwaye babonelela ngesihluzo kunye nokhuseleko kulawo mathemba. Bachukumise kwaye uya kufika phambi komntu ofuna.
Njengoko usebenza ngesicwangciso-qhinga sakho sentlalo, musa ukuxhoma ukuba ngoobani iindwendwe okanye zivelaphi, gxila ekubeni ezo ndwendwe zithetha ngawe kwaye zikuzisa kwithemba! Ubudlelwane nabo babachaphazeli kunye nabahluzi yinto ebaluleke kakhulu ongafanele uyihoye.
IPodcasting yeB2B 101
Ukusetyenziswa kweMidiya yoLuntu nguMmandla wase-US